Hain-trano tany Toamasina : Maherin’ny 100 no kila forehitra -
AccueilSongandinaHain-trano tany Toamasina : Maherin’ny 100 no kila forehitra
Hain-trano tany Toamasina : Maherin’ny 100 no kila forehitra
Naharitra telo ora sy sasany vao voafehy ny afo. Tranombarotra, tranovato ireo vita amin’ny hazo, may kila forehitra avokoa vokatry ny firehetana tany Tanambao V Toamasina. Ny antoandron’ny alakamisy tokony ho tamin’ny 2 ora latsaka folo no nitranga ny hain-trano. Vokany nirehitra avokoa ny trano manodidina ny 100 mahery tao an-toerana.
Araka ny fitantaran’ny nanatri-maso, dia tamina trano fivarotana irony “bonbon coco” irony no niavin’ny afo. Navelan’ny tompon-trano irery tao ny afo nirehitra, ka nahatonga izao firehetana goavana izao. Araka izany, nahakasika ireo trano maro teo an-tanàna izany, ka nahamay ireo trano biriky teo amin’ny manodidina sy ireo trano vato, sy ireo tranombarotra rehetra. “Tsy hita holazaina intsony raha ny fahavoazana vokatry ny tsy fitandremana niainga tamina tokantrano iray, araka ny nambaran’ny zandarimariam-pirenena nijery mivantana ny zava-nisy”.
Manodidina ny telopolo tamin’ireo trano no tena may kila tsy nisy azo noraisina intsony. Saika efa lasa lavenona avokoa araka izany ireo entana rehetra tao amin’ireo trano may ireo. Na dia izany aza, niezaka nanao izay ho afany ny mponina teo amin’ny manodidina namono ny afo, izay tamin’ny fotoana mbola tsy nahatongavan’ny mpamonjy voina. Nanano sarotra ihany koa noho izany ny fidirana tao amin’ireo toerana niharan’ny famaizana, satria dia tery tanteraka ny lalana. Ankoatra ny fahateren’ny lalana, dia nampahazo vahana ny afo ihany koa ny fitsokan’ny rivotra ambony dia ambony tao an-toerana. Antsasakadiny taorian’ny antso vao tonga teny an-toerana ny sampandraharaha mpamono afo, saingy tsy nety voafehy ny afo. Ora telo mahery vao maty tanteraka ny afo araka ny fampitam-baovao avy amin’ny lehiben’ny sampana mpamonjy voina. Tamin’ny ora hanoratanay kosa anefa dia nilaza izy ireo fa mitohy ny famonoana sy ny fanaraha-maso ny afo tsy hihitatra.
Nisavorovo ny mponina. Nifanjevo tanteraka ny olona teo amin’ny manodidina manoloana ny loza. Tao no niezaka nanavotra ny ain’ireo olona sy ny fananany, nefa nisy ihany koa ireo mpanararaotra. Etsy andanin’izay, manodidina ny folo ny isan’ireo naratra vokatry ny fifanjevoana, saingy tsy nisy kosa ny aina nafoy tamin’ity voina ity.